Xirfadlayaasheeda hiwaayadda leh waxaa laga yaabaa inay arkeen walaxda labaad ee walxaha qarxa
ACCUEIL » SAYNISKA Xirfadlayaasheeda hiwaayadda leh waxaa laga yaabaa inay arkeen walaxda labaad ee walxaha bartaan - BGR
Xirfadlayaasheeda hiwaayadda leh waxaa laga yaabaa inay arkeen walaxda labaad ee walxaha bartaan - BGR
Bulshada cilmiga cilmiga xiddigiska waxay ku ololeeyeen dhamaadka 2017 kadib markii shay la rumeysan yahay inuu ka yimid meel ka baxsan nidaamkayaga qoraxda oo la arkay. xawaaraha ku wareegsan Qorraxda iyo markuu ku soo noqday meeshuu dhex dhexaadka ahaa. U fiirsashada shayga ayaa dhalisay dood u dhaxeysa saynisyahano aan go'aamin karin inuu yahay comet, asteroid ama wax kale, laakiin hal shay ayaa hubaal ah: Oumuamua, sida Shayga ayaa la magacaabay, kama uusan imaan qoryaha noolaha. .
Haddaba, gudaha horumar xiiso leh kaas oo ka bilaw goobo wareega cilmiga xiddigiska, booqde kale oo suuragal ah ayaa la aqoonsaday saynisyahannaduna si fiican ayey u fiirinayaan. si rasmi ah loogu magacaabay C / 2019 Q4 (Borisov), wuxuu ahaa waxaa arkay astronomer-ka Gennady Borisov dhamaadka bisha Agoosto. Iyada oo la adeegsanaayo indha indheyntii hore, xisaabteeda marinteeda waxay shaaca ka qaadday qaab sallil ama qaab saddle ah, iyadoo soo jeedineysa inaysan ku dhex jirin cirifka cadceedda.
Qaar ka mid ah jaantusyada kale ee gb00234. Dib u xaqiiji kuwaa adoo u malaynaya in ujeedka sicir bararku waa sax. Tan wali lama xaqiijin. Animation-ku wuxuu muujinayaa aragtida qorraxda laga soo bilaabo comet-ka ilaa sannadaha 120.
Waa tan jilid muujineysa halka ay ka timid cirkayaga. https://t.co/m8MHalo1Qw pic.twitter.com/xZUHizVYNe
Marka la eego dhaqdhaqaaqyadeeda la arkay, shayga waa inuu ka soo baxaa nidaamkayaga qoraxda ka dib marka uu xiddiggeena xidho, taas oo macnaheedu yahay inay tahay booqde meel ka baxsan nidaamkayaga qoraxda, sida Oumuamua oo kale. ahaa.
Soo helitaanku waa muhiim in la caddeeyo warside ka socda Xarunta Yaryar Muujinta dhowr aragtiyood oo ay sameeyeen dhowr shaqsiyaad.
"Marka la eego aragtida la heli karo, xalka orbital ee shaygu wuxuu la xidhiidhay canaasiirta hufan ee hoos lagu soo bandhigay, taas oo muujinaysa asal ahaan isugeyn," ayaa laga soo xigtay Xarunta Yaryar. "Dhowr kombiyuutar oo kale oo ku jira orbit ayaa gaadhay go'aanno la mid ah."
Tani waa mid xiiso gaar ah leh sababtoo ah, si ka duwan tartanka loo yaqaan 'Oticamua' ka dib markii ay dib ugu soo noqotay goobta, sheygan waa inuu noqdaa "mid la arki karo ugu yaraan hal sano," ayuu yiri MPC, isagoo siinaya saynisyahano waqti badan in la barto iyo, in rajo laga qabo, in wax badan laga barto astaamaha jirkeeda iyo laga yaabee xitaa asalkeeda.
Isha Muuqaalka: NASA / ESA
Ku guuleystaha Triple Crown Xaqiiji baarista daawada ee guuldaraystay ka hor intaadan ku guuleysan - BGR